देउवाले यसरी खोले कांग्रेसको बाध्यता, कार्यकर्ताहरूको मन छोयो – Dainiki Online
27/02/2021 27/02/2021 adminLeaveaComment on देउवाले यसरी खोले कांग्रेसको बाध्यता, कार्यकर्ताहरूको मन छोयो
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले पद छाड्दा राम्रो हुने बताएका छन् । काठमाडौंमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै देउवाले सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेकोले ओलीले कि त प्रतिनिधि सभामा बहुमत पुर्‍याउनुपर्ने नभए छोड्नुपर्ने बताएका हुन् ।‘अदालतको निर्णयपछि ओलीजीले संसदमा कि त बहुमत पुर्‍याउनुपर्‍यो होइन भने त छोड्दा राम्रो हुन्छ’, उनले भने, ‘उहाँलाई यसो गर उसो गर हामीले भन्ने होइन । उहाँको पार्टीको कुरा हो ।’
सभापति देउवाले पार्टी संसदीय दलको बैठक पनि राख्ने बताएका छन् । ‘हामीले पार्टीमा पनि सल्लाह गर्नुछ अब कसरी जाने भनेर’, उनले भनेका छन् ।उनले प्रतिनिधि सभा बाँचेकोले खुसी हुनुपर्ने बताएका छन् । कांग्रेससँग संसदमा कम सिट रहेको देउवाको भनाइ छ ।‘संसदमा यति कम सिट छ हाम्रो’, सभापति देउवाले भने, ‘पक्ष पनि हुँदैन, विपक्ष पनि हुँदैन जस्तो छ । विपक्षी पार्टी पनि नहुनेजस्तो छ ।’देउवाले भनेका छन्, ‘उनीहरू मिले भने हामी विपक्षी पार्टी होला । उनीहरूको पार्टी के हुन्छ ।’सभापति देउवाले पार्टीलाई रोग लागेको पनि बताएका छन् । उनले महाधिवेशन भदौमा जसरी पनि गर्नुपर्ने बताए ।
उनले अब प्रतिनिधि सभा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । देउवाले कांग्रेसले केही गरेन भन्नेहरूले नै अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसलाई खोजिरहेको बताएका छन् ।कांग्रेसले केही गर्दैन भनेर विरोध गरिरहेकाहरू अहिले कांग्रेसलाई खोज्न थालेको देउवाले बताएका छन् । कांग्रेसबाट केही आशा गर्नु राम्रो पक्ष भएको देउवाको भनाइ छ । देउवाले भने, ‘भोट दिने बेला कांग्रेसलाई नदिने अहिले कांग्रेस चाहियो ?’उनले मानिसहरूले कांग्रेसलाई खोजिरहेको पनि बताए । जनता, वुद्धिजीविहरू र पत्रकारले कांग्रेस कता छ भनेर खोजेकोले उनले धन्यबादसमेत दिए ।
उनले नेकपाभित्र दुइटा समूह देखिएको तर पार्टी कानुनी रूपमा एक नै रहेको बताए । ‘उहाँहरूका बीचमा झगडा भयो। अहिले दुइटा समूह छ’, उनले भने, ‘पार्टी एकै छ । हामी कुनै पार्टी फुटोस् भन्ने चाहना पनि छैन ।’सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे अन्तरिम आदेश नदिएकोले आफूले पुनःस्थापना र चुनाव दुबै जे भए पनि स्वीकार गर्छौं भनेको देउवाले स्मरण गरेका छन् ।‘सर्वोच्चले स्टे अडर देला भनेको दिएन । त्यसपछि के होला के होला भन्ने लाग्यो मलाई । शंका थियो’, उनले भने, ‘त्यही भएर मैले पुनःस्थापना र चुनाव जे भए पनि स्वीकार गर्ने बताएको हुँ ।’देउवाले संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएका कारण चुनाव हुन्छ भन्ने लागेको पनि बताएका छन् ।
संसद पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च फैसलाले प्रजातन्त्रको जित भएको देउवाले टिप्पणी गरेका छन् । ‘माधव नेपाल–प्रचण्डजीहरू कसरी जान्छन् ? नेकपा के हुन्छ ? भन्ने प्रष्ट नभएकाले अझै के हुन्छ भन्ने अन्यौल छ’, सभापति देउवाले भनेका छन् ।सभापति देउवाले भने, ‘भोट दिने बेला कांग्रेसलाई नदिने अहिले कांग्रेस चाहियो ?’ उनले नेकपाभित्र दुइटा समूह देखिएको तर पार्टी कानुनी रूपमा एक नै रहेको बताएका छन् । ‘उहाँहरूका बीचमा झगडा भयो । अहिले दुइटा समूह छ’, उनले भने, ‘पार्टी एकै छ । हामी कुनै पार्टी फुटोस् भन्ने चाहना पनि छैन ।’